Hidha haaromsaafi waliigaltee biyyoota sadeenii
Hidha haaromsaafi waliigaltee biyyoota sadeenii Featured
Yaa’ii Gamtaa Afrikaa 30fa tibbana Finfinneetti gaggeeffamaa ture cinatti gaggeessitootni biyyoota sadeenii (Itoophiyaa, Misiraafi Sudaan) walarguun dhimma Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiuyaarratti marii’ataniiru. Kanaan duras ijaarsi hidha haaromsaa biyyoota yaa’a gadiirratti dhiibbaa qabaachuufi dhabuusaa qorannoon taasifamaa kan ture yoo ta’u, argannoon qorannichaa keessumaa Misiritti shakkii waan uumeef, yeroo xiqqoof waltajjiin mariisaanii addaan citeera.
Kanumaan walqabaatee hariiroon biyyoota sadeenii kessumaa kan Itoophiyaafi Misir akka laafu ta'ee ture. Haa ta’u malee, yaa’ii Gamtaa Afrikaa torban darbe Finfineetti gaggeeffamaa ture sababeeffachuun gaggeessitootni biyyoota sadeenii Hoteela Sharaatenitti walarguun kan marii’atan yoo ta’u, garaagarummaa ijaarsa hidhachaarratti qaban dhiphisuun waliigaltee cimaarra gahuu danda’aniiru. Kunimmoo hariiroon biyyoota sadeenii daran cimsuun obbolummaa lammiilee biyyoota sadeenii caalaatti kan cimsuudha. Biyyootni sadeenuu fayyadamummaa isaanii eeguufi eegsisuuf dhimma ijaarsa hidha haaromsaarratti akka qaama tokkootti hojjechuuf waliigaltee gahuu kan danda’an yoo ta’u, waliigalteesaanii hojiitti hiikuuf qajeelfama waliigaltee (Declaration of principles) Sudaan, Kaartumitti malleessan kan kabajan ta’uu yeroo lammaffaaf mirkaneessaniiru.
Biyyootni sadeen ijaarsa hidhichaa ilaalchisuun odeeffannoowwaniifi ragaalee barbaachisanirratti qorannoo taasisuuf kan irratti waliigalan yemmuu ta’u, ji’a tokko keessatti ragaalee jiran mara walitti qabuuf waliigalaniiru. Dhimmuma kana ilaachisuun Dubbii himaan Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Obbo Mallas Alam dhengadda EBCf akka ibsanitti, ijoon waliigaltee gaggeessitoota biyyoota sadeenii kan miilanaa ijaarsa hidha guddicha haaromsaarratti mariin gaggeeffamaa ture kan si’a tokkoon xumuramu osoo hintaane waltajjii marii walitti fufiinsa qabuun rakkoolee jiran maraa furuun murteessaa ta’uusaati. Waltajjiin marii ministirootaa gidduutti addaan citee ture itti fufuu akka qabuufi karaa nagaan gara furmaataatti deemuun barbaachisaa ta’uusaafi waliigalteerra gahuusaanii ibsu.
Dhiibbaa ijaarsi hidha guddicha qabuufi faayidaa hidhichi keessumaa biyyoota yaa’a gadiif kennuu danda’urratti qorannoon akka adeemsifamuuf koreen gaggeessitoota biyyoota sadeeniin hundeeffameera; ji’a tokko keessatti hojicha akka eegalaniifis ajajni kennamusaa dubbatu. Kana malees biyyootni sadeen gama bu’uuraalee misoomaatiinis waliin hojjechuuf waligalteerra ga'uusaaniifi baasiiwwan dhimma kanaaf barbaachisan walta’iinsaan aguuguuf xiyyeeffannaan kan hojjetan ta’uu mirkaneessaniiru.
Xiinxaltootni siyaasaa biyya keessa jiran garuu waliigaltee gaggeessitoota biyyoota sadeen gidduutti taasifame ija shakkiin kan ilaalaniidha. Kunis, ejjennoon hoggantoota olaanaa Misiraa yeroo yerootti kan jijjiiramu waan ta’eef, inni ammaa kun kan duraarraa garaagarummaa waan hinqabneef yeroo xiqqoo booda diigu, sodaa jedhu kaasu. Ji’uma darbe keessallee Misiri dhimma ijaarsa hidhichaarratti Baankiin Addunyaa dhimmicha akka ilaaluuf yaada dhiyeessaniyyuu gama Itoophiyaatiin fudhatama argachuu hindandeenye.
Walumaagalatti, ijaarsa hidha guddichaarratti walirraa fagaachuu malee akka qaama tokkootti walta’insaan waliin hojjechuuf murteessaniiru. Itoophiyaan garuu waliigaltee taasifame fudhachuun callisuu osoo hintaane itti fufiinsaan hojii dippilomaasii ciminaan hojjechuu akka qabdu ogeessotni siyaasaa ni gorsu.
Torban kana/This_Week 12406
Guyyaa mara/All_Days 1821826